Iyini Imvelaphi yeLizwi elithi 'Mulligan' eGoli?
" IMilgan ," kwimiqondo yayo yegalufa, igama elitsha, kodwa yayisetyenziswa ngokufanayo kwiiklasi ze-golf nge-1940s.
Kwaye kukho ezininzi, amabali amaninzi ngokuzalwa kwegama legalufa "mulligan" ... kwaye kunokwenzeka ukuba akukho nanye kubo.
Ngenxa yokuba akukho mntu uyazi kakuhle indlela i-mulligan eyafumana ngayo i-golf yayo intsingiselo (i-mulligan, eqinisweni, "yenzeni" -kubethe kakubi, uthathe i-mulligan uze uzame kwakhona).
Konke esikuyo ... loo mabali. Kwaye siya kubaxelela ezimbalwa apha.
Imyuziyam yase-USGA inikeza iinkcazelo ezininzi ezinokwenzeka. Ngomnye, umntu ogama lakhe nguDavid Mulligan wayehlala eSt. Lambert Country Club eMontreal, eQuebec, ngawo-1920. U-Mulligan akuvumele ukuba ahluthe i-tee ngelinye ilanga, akazange avuyiswe ngemiphumo, aphinde ahlaziywe, aze aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde atshaye. Ngokwebali, wabiza ngokuthi "ukulungiswa kwesohlwayo," kodwa amaqabane akhe acinga ukuba igama elifanelekileyo lifunekayo kwaye libiza ngokuthi "mulligan."
Mhlawumbi ngenxa yokuthi uMnu Mulligan wayengumntu oqeshisayo oshishino-ophethe amahotele amaninzi - eli gama lalingenakukwazi ukubamba. Kodwa oko kuphela ukuba ukholelwa le nguqulo. Yiyiphi, hayi, ayikho na ubungqina obunzima bokuyixhasa. (I-Webga yeWebhsayithi ye-USGA inikezela ngezinye iinguqulelo ezimbini ze-David Mulligan ibali - imvelaphi ye "mulligan" imangalisa kangangokuthi ibali elifanayo livutha ngeenguqu ezintathu ezahlukeneyo!)
Enye ibali ekhankanywe ngu-USGA nguJohn "Buddy" uMalgan, owaziwa ngokuphinda ahlasele amahlumela ahluphekileyo kwi-Essex Fells Country Clubs e-NJ
Enye ingcamango enomdla idibaniswa yiWebhsayithi, i-StraightDope.com. Ukuphendula umbuzo malunga nemvelaphi ye "mulligan" (igama eliqhelekileyo laseIreland kwaye, khumbula, iMntla-mpuma ye-US yayininzi kakhulu i-Irish ekuqaleni kweXesha lama-20), i-StraightDope.com yaphendula yathi, "Enye imvelaphi yendalo ixhomekeke kwixesha Abantu baseIreland-baseMerika babejoyina amaqela asebuqili belizwe kwaye bahlekwa njengento engafanelekanga yegalufu.
Oku kuya kwenza ukuba eli gama liyi-slur yobuhlanga ebanjwe, njenge 'ihlobo laseNdiya' okanye 'i-Dutch ithole.' "U
"Inkcazelo yeLizwi kunye neNkcazo yeNkcazo" inikeza inkcazelo engakumbi. Ihambisa igama elivela kwiimpawu zokuthi, emva komhla, ziza kufaka ibhola yehhala ye-bhoze kwi-bar ukuze abathengi bangene. Le bhotile yamahhala yayibizwa, ngokutsho kwincwadi, i-Mulligan. Eli gama laguqulelwa kwiklasi yegalufu ukuchaza "i-freebie" ekufuneka isetyenziswe ngabagadi begalufu. Imyuziyam yase-USGA ayicacisi ibali elivela kuyo yonke into, ekhokelela ukuba ndikholelwe ukuba ibali lotywala lincinci ngcaciso engentla ichanekileyo.
Ngoko, ngelishwa, kufuneka sigqibe ekubeni akukho nkcazo ecacileyo kwimvelaphi yegalufa ye-mulligan. Kwimi, iincwadana ezininzi ziquka i-golfer egama lingu-Mulligan.
Buyela kwikhowudi ye- FAQ yomlando weGolati
Abadlali beGolfers Ukudubula 60 kwi-PGA Tour
I-10 yeGolfers ephezulu kwiMbali yeeMidlalo zoTyelelo
Indlela iClaret Jug yaba ngayo iTrophy Championship
Iingoma eziphambili zeBhola zexesha lonke
Fields Left Fielders kwi-Major League Baseball (MLB) Imbali
Iimormon Ikholelwa Ukuba uYesu Wazalwa Ngo-Ephreli 6
IHarris Matrix - Isixhobo sokuqonda i-Archaeological Past